ATX isi mmalite: ihe niile ị chọrọ ịma gbasara PSU gị Akụrụngwa n'efu
ATX isi mmalite: ihe niile ị chọrọ ịma
La ATX isi mmalite Ọ ghọọ ọkọlọtọ na ụwa PC, ụdị ike ọkọnọ kwekọrọ na ọtụtụ bọọdụ motherboard nke arụpụtara taa yana ụfọdụ ụdị dị iche iche nke oge a nke bịara nwee ike ịhazi usoro nhazi dị ike karị nke na-achọkwu ume.
Ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ otu ụdị ụdị ike ọkọnọ ATX a, ị ga-achọ ịhụ nkọwa niile dị oke mkpa ịchọrọ ịma mgbe ị na-ahọrọ otu n'ime ndị a Ihe eletrọniki...
1 Kedu ihe bụ isi mmalite ATX?
2 Otu esi ahọrọ isi iyi ATX
2.2 Asambodo na arụmọrụ
2.3 ATX nchebe nchebe
2.4 Dị PSU
Kedu ihe bụ isi mmalite ATX?
A na-akpọkarị PSU (Power Supply Unit), ma ọ bụ ike ọkọnọ, ma ọ bụ ATX isi mmalite. Ọ bụ ihe ọ bụla karịa ngwaọrụ dakọtara na ọkọlọtọ ATX nke nwere ike ịtụgharị usoro dị ugbu a nke netwọk iji dezie ugbu a, yana kesaa volta dị iche iche iji nwee ike zụọ ihe niile dị na PC. Nke ahụ bụ, onye na-ahụ maka inye nri motherboard na ihe mejupụtara ya, sistemu jụrụ, usoro nchekwa, wdg.
Ihe mgbaàmà ndị a na-ahụkarị nke nsogbu ike ọkọnọ bụ PC nke na-agaghị ebu ụzọ, ma ọ bụ gosipụta ọrụ na LED ma ọ bụ ndị fan, yana igwe na-acha anụnụ anụnụ (BSoD), isi ísì ọkụ ma ọ bụ anwụrụ ọkụ, mgbagha a na-atụghị anya ya, wdg.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka obere akụrụngwa, eziokwu bụ na bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi nke otu, ebe ọ bụ na ọ bụ otu n’ime ndị na-enyekarị nsogbu karịa ma ọ bụrụ na ị họrọghị nke ziri ezi, ọ ga-abụkwa nke na-egbochi ike ma ọ bụ ndọtị ndị enwere ike ịme na PC gị. Ọbụna nkwụsi ike na ndụ nke ihe ndị ọzọ ga-adabere na ya.
Otu esi ahọrọ isi iyi ATX
Họrọ ezigbo isi iyi Ọ ga - ahụ na arụmọrụ dị mma yana na echedoro ihe ndị mejupụtara ya na oke ọkụ eletrik na spikes nke nwere ike ime ka ihe ndị ọzọ nke sistemụ ahụ rụọ ọrụ na-ekwesịghị ekwesị na ọbụlagodi n'isi.
La ike ọ dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ isi iyi ike. Ikwesighi ịdị mkpụmkpụ, ma ọ bụ na ịgaghị enwe ike ịme ihe niile ị chọrọ (ọbụlagodi iche maka mgbasawanye n'ọdịnihu). Mana ikwesighi ịhọrọ mpempe akwụkwọ dị ike nke ị na-agaghị erite uru na ya, ebe ọ ga-abụ ego efu.
Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịme ihe dị mma dabere na ngwaike na ị ga-ahọrọ. N'ozuzu, maka PC dị ugbu a, ọ gaghị adị n'okpuru 500W, ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị ike karị. Enwere ike dị iche iche, site na narị otu narị watts ruo na ihe karịrị 1KW n'okwu ụfọdụ dị iche, na-abụkarị ndị nke 650 ma ọ bụ 750W ...
Iji nwee ike họta ike ono,, ị nwere ike iji ngwaọrụ dị n'ịntanetị nke ga - enyere gị aka gbakọọ ike dị mkpa site na itinye nhazi PC gị, dịka ihe mgbako a. Dị ka ndụmọdụ m ga-agwa gị ka ịhọrọ 50 ma ọ bụ 100W karịa ihe ọ na-egosi na-eche echiche maka ịbawanye usoro n'ọdịnihu. Tụkwasị na nke ahụ, isi iyi ATX nke na-arụ ọrụ nke ọma karị dị mma karịa isi iyi nke nnukwu ibu jupụtara.
Asambodo na arụmọrụ
Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-echefu ebe a, ọ dịkwa mkpa ịhọrọ ezigbo isi iyi nke ATX nwere asambodo oge, ma nke nchekwa ume, dịka Energy Star, yana ndị ọzọ nke nchekwa ma ọ bụ gburugburu ebe obibi dị ka nke CE, RoHS, wdg.
E wezụga nke ahụ, enwere mkpado ọzọ na-ekpebi arụmọrụ n’otu ụzọ ahụ ngwa ụlọ nwere akara arụmọrụ A +, wdg. M na-ekwu maka aha mmado:
Enweghị mkpado: ọ naghị ekwe nkwa elu arụmọrụ, ọ nwere ike ịbụ onye ọ bụla. Ndị a na-abụkarị isi mmalite ATX dị ọnụ ala ma ọ bụ dị ala nke ị kwesịrị izere.
80 gbakwunyere ọla edo: pụtara na ọ bụ 80% ike ịrụ ọrụ nke ọma.
80 Plus Bronze: ruru 82% ike arụmọrụ.
80 Plus ọlaọcha: ike ịrụ ọrụ ga-eru 85%.
80 gbakwunyere ọla edo: gaa ruo 87% ike arụmọrụ.
80 Platinum gbakwunyere- Ha na-enweta nnukwu akara 90% ike arụmọrụ.
80 gbakwunyere Titanium: ha kachasị mma n'ihe gbasara arụmọrụ, yana 92%.
ATX nchebe nchebe
La ọnụ ala ATX ọ naghị agụnyekarị ụdị nchebe ọ bụla, nke bụ nnukwu ndudue. Fọdụ, site na ịchekwa na akụrụngwa a, na-etinye ihe fọdụrụ na usoro ahụ ihe egwu, ebe ọ bụ na ụfọdụ spikes spikes nwere ike imetụta ihe ndị dị ka motherboard, CPU, GPU, ebe nchekwa, wdg.
Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ izere ihe ọkụ eletrik ndị ahụ niile, ntụgharị ike eletrik, na ihe omume ndị ọzọ nwere ike imebi ma ọ bụ mee ka ihe mejupụta arụmọrụ, ị ga-ahụrịrị na ha nwere ọtụtụ arụ ọrụ na nchebe. Iji maa atụ:
Ike Dị Mma ma ọ bụ PWR_OK: Lelee na ọkọnọ mgbama dị mma, ihe na ọ fọrọ nke nta niile na-enwe.
OCP (Nchekwa Na-adị Ugbu A): ọ bụ ụdị nchebe megide elu elu ugbu a ma ọ bụ ike.
OVP (N'ime Volta Nchedo): otu dị ka nke gara aga mana maka nnukwu voltaji ma ọ bụ oke elu.
UVP (N'okpuru Nchedo Volta): nchebe ọzọ maka obere voltages, ya bụ, obere elu nke na-emerụkwa ahụ.
OPP (N'ime Ike Nchedo): ọ bụ nchebe megide mbubiga ókè.
OTP (N'ime Nchekwa Okpomọkụ): Nke a na - echebe megide oke okpomọkụ nke ngalaba a.
SCP (Short Circuit Nchedo): mkpụmkpụ-nchedo mmewere.
YEP (Ugboro & Inrush Nchedo): ịkwụsịtụ ugbu a.
NLO (Ọrụ Adịghị Ibu): arụ ọrụ dị ala.
BOP (Agba aja aja Nchedo): na-echebe megide mmejọ voltaji nwa oge.
Mgbe ị na-ahọrọ isi mmalite ATX, ọ dịkwa mkpa ka ị buru n'uche ihe ụdị ị nwere ike ịchọta n'ahịa:
Dị ka modular ya si dị:
Abụghị modular: ha bụ ndị a na-ahụkarị, na eriri ndị a na-erere na isi iyi n'onwe ya.
Ọkara-modular: ha nwere njikọ nke motherboard, ATX, rere, ebe ndị ọzọ na-ewepụ (ESP, PCIe, SATA, Molex, ...).
modular- Enwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ wepụ eriri niile. A ụzọ na-ahapụ doro anya ohere n'ime ụlọ elu nke mere na obi jụrụ ikuku circulates mma na aesthetic ihe, ebe ọ bụ naanị na ị ga-enwe Gịnị na ị chọrọ n'ezie, na ọ bụghị ihe niile.
Mpempe usoro: bụ usoro ma ọ bụ ụdị ihe kwekọrọ na ụdị nke motherboard nke ọ ga-adaba. Enwere SFX, ITX, miniITX, ATX, microATX, microATX, ma ọ bụ ndị buru ibu maka akụrụngwa kachasị ike, dị ka EATX. Nke a enweghị ohere maka ọgba aghara, ebe ọ ga-adaba na bọọdụ ahọpụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » General » ATX isi mmalite: ihe niile ị chọrọ ịma
Otu esi ahọrọ multimeter: atụmatụ niile ịchọrọ ịma
NVIDIA GeForce GTX G-Assist: AI iji kpọọrọ gị